Cross-Border Environmental Cooperation: Israel, Palestine na Jọdan
Home » Njikọ Mkpakọrịta Akụkọ » Cross-Border Environmental Cooperation: Israel, Palestine na Jọdan
by eTN Njikwa Editor
dere eTN Njikwa Editor
Mgbe Shadi Shiha rutere n’ókè Izrel na Jọdan wee hụ ndị agha Izrel ji ngwá ọgụ na ọkọlọtọ ndị Izrel, ọ fọrọ nke nta ka ọ tụgharịa lawa.
"Ezigbo ụjọ jidere m," ka a gwara The Media Line n'ọchị. “Ahụwo m ndị uwe ojii na Jọdan ma ha enweghị égbè. Echere m na m na-eji tankị na égbè aga mpaghara agha. ”
O siiri ya ike ime ka ezinụlọ ya kwenye ka ọ bịa n'ụlọ akwụkwọ na Israel. Ha na-echegbu onwe ya banyere nchekwa ya, ọbụlagodi tupu esemokwu kachasị ọhụrụ n'etiti Israel na Jọdan, ọtụtụ ndị Jọdan megidere ịkpọtụrụ Israel. Ndị ọrụ ọgụgụ isi nke Jọdan kpọrọ ya maka nzukọ wee jụọ ya ihe mere ọ ga-eji gawa Izrel.
Nke ahụ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu afọ gara aga. Shiha, onye bụkwa onye na-agba egwu agbaji, nọrọ ọkara abụọ na Arava Institute na Kibbutz Ketura na ndịda Israel ma kwuo na ọ gbanwere echiche ụwa ya.
Ọ sịrị, "Amaghị m na e nwere ebe ọ bụla ndị Palestaịn na ndị Izrel bi n'ezie na ha bụ naanị ndị enyi." Agara m Haifa (obodo ndị Arab na ndị Juu agwakọtara) ma ha bikọ ọnụ dịka ọ nweghị ihe ọ bụ. Agakwara m n'ogige ndị gbara ọsọ ndụ na Palestine na West Bank ma ọ jọgburu onwe ya etu ndị mmadụ si ebi. "
Aralọ ọrụ Arava, nke jikọrọ aka na Mahadum Ben Gurion, na-enye mmemme a nabatara maka mmemme maka ụmụ akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ na ụmụ akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ. Fọdụ na-abịa maka otu ọkara afọ; ndị ọzọ ruo otu afọ zuru ezu. Ebumnuche bụ ịmụ banyere nsogbu gburugburu ebe obibi site na mpaghara oke na ntụgharị.
Ihe omume a pere mpe, na-enye ohere maka ịkpọtụrụ ndị prọfesọ n'otu n'otu na ohere ịme nyocha gburugburu ebe obibi.
"Ruo afọ 20 Institutelọ Ọrụ ahụ agafeela nkwado mmekọrịta gburugburu ebe obibi na nsogbu esemokwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị site na mmemme agụmakwụkwọ anyị na-eme ka ndị Israel, Palestinians, ndị Jọdan na ụmụ akwụkwọ mba ụwa jikọtara ọnụ," David Lehrer, Executive Director of the program gwara The Media Line. "Site na mmemme nyocha anyị n'ime mmiri, ume, ọrụ ugbo na-adigide, nchekwa na mmepe mba ụwa, ka afọ iri abụọ gachara, anyị nwere ihe karịrị otu puku ndị okenye na ụwa niile."
Ihe ọmụmụ sitere na Nchịkwa Mmiri na Middle East na Mgbasa Ozi Gburugburu Ebe obibi na Mkpebi Esemokwu na Akwụkwọ Nsọ dị ka Igodo nke Echiche Gburugburu Ebe Obibi. Studentsmụ akwụkwọ na-abụkarị otu ụzọ n'ụzọ atọ nke Israel, otu ụzọ n'ụzọ atọ Arab, nke gụnyere ndị Jordan, Palestinians, na ụmụ amaala Arab nke Israel, na otu ụzọ n'ụzọ atọ mba ụwa, ọkachasị sitere na US.
Studentsmụ akwụkwọ Palestine gara n’ihu na-aga n’agbanyeghi na-eto “mgbochi ịkpa oke aka”, otu ngagharị nke na ewepu nkwado ọhaneze Israel na Palestaịn ruo mgbe enwere ọganihu na mkparịta ụka udo. Lehrer kwuru na o siwanye ike ikwenye ụmụ akwụkwọ ndị Jọdan ka ha gaa, ebe ọnọdụ ọha na eze na Jọdan megide Israel esiwanyewanye ike.
"Achọrọ m ịmatakwu banyere esemokwu Israel na Palestine," Shiha kwuru. “Anụrụ m ihe niile site na mgbasa ozi na mgbasa ozi na-eme ka ọ dị ezigbo njọ. Abịara m ebe a ka m zute ụfọdụ ndị Izrel na ụfọdụ ndị Juu n’ihi na ahụtụbeghị m ha mbụ. Site na mgbasa ozi, ọ dị ka ha na-egbu ma na-agbagbu ndị Arab. ”
Valọ ọrụ Arava dị na Kibbutz Ketura, kibbutz pluralistic bụ nke ndị Amerịka jikọtara na ndị na-eto eto na-eto eto na-eto eto malitere na 1973, n'ime ọzara Arava. Taa, e nwere ihe karịrị ndị Israel 500 bi ebe ahụ, yana azụmaahịa sitere na ụbọchị na-eto eto ruo n'ịzụ algae na-acha uhie uhie maka ihe ịchọ mma gaa n'ubi mkpụrụ osisi pụrụ iche maka osisi ọgwụ.
Mgbe ụmụ akwụkwọ ahụ bi na dorms na kibbutz, ha na-eri nri ha na nnukwu ụlọ nri kibbutz ma kpọọ ha ka ha sonyere ndị otu kibbutz maka mmemme okpukpe na mmemme kibbutz gụnyere agbamakwụkwọ. Enwekwara ọdọ mmiri ọdọ mmiri nke Olimpik na-enyere aka ịkụ ọkpọ ọzara.
Dika otutu akwukwo akwukwo ndi ozo, nke a adighi onu. Ọ bụ ezie na ndị Palestaịn na ndị Jọdan na-enweta agụmakwụkwọ zuru oke, ụmụ Israel na-akwụ ihe dị ka $ 2000, ụmụ akwụkwọ US na-akwụ $ 9000 otu afọ, gụnyere ime ụlọ na bọọdụ. Nke ahụ ka dị obere karịa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kọleji America niile.
Yonatan Abramsky, nwa akwukwo nke Israel, mechara je agha agha ya.
"Mgbe niile enwere m mmasị n'okwu metụtara gburugburu ebe obibi na ibi ndụ na-adigide," ọ gwara The Media Line. “Achọrọ m ịchọta otu obodo n'ọzara na m nụrụ ebe a ma lelee ya. Ọ dị ịtụnanya. ”
Dallal, nwanyị Palestine rịọrọ ka ọ ghara inye aha nna ya, emechaala akara BA na Mahadum Bir Zeit.
"Agaghị m eche na m ga-anụ ụtọ ya dịka m si eme," ọ gwara The Media Line. “Enwere m ike ikwu ihe ọ bụla m chọrọ ikwu, na-emekwa ihe ọ bụla m chọrọ. Ana m egosi onwe m n'agbanyeghị agbụrụ m na ezinụlọ m. Obi erughị m ala karịa ka m nọ na West Bank. ”
O kwuru na nne ya achọghị ka ọ hapụ West Bank, mana maka ọdịnala ndị ọzọ na-enweghị ihe jikọrọ ya na esemokwu Israel na Palestine.
O kwuru, sị: "Ọ bụ n'ihi na m bụ nwa agbọghọ na enwere m ụfọdụ ọrụ - ekwesịrị m ịlụ di na ịmụ ụmụ, ọ bụghị ịga njem."
Lọ ọrụ ahụ ka mere 20th afọ. Dị ka akụkụ nke ememme ahụ, ha malitere Mmemme Innocation nke Arava, nke na-enye onyinye nke mkpụrụ ego nye ìgwè nke ndị okenye iji kwado atụmatụ maka nkwado na mmekọrịta udo gafere ókèala. Ndị otu a ga-enwerịrị opekata mpe mba abụọ - Israel / Palestian ma ọ bụ Israel / Jordanian ma ọ bụ Palestian / Jordanian.
Jordani Shadi Shiha alaghachila na Amman ma mepee ulo oru ya na ndi enyi ya abuo, ugbo ala na wax nke na-ejighi mmiri. N'oge mgbụsị akwụkwọ, ọ ga-agagharị n'ụlọ akwụkwọ kọleji US dị ka akụkụ nke njem mbanye maka Institutelọ Ọrụ Arava.
Mwakpo egwu nke abụọ na otu ụlọ nkwari akụ ahụ, otu cafe iji gbuo ndị njem nleta ọcha
Kuwait osimiri: al-Khiran - ebe ezumike maka ịnọpụ
Akụkọ Njem UK
Njem US: cingtụkwasị US na ndepụta UK Amber enweghị isi
Ighaghari patent ogwu a: World Tourism Network na-akwado nkwaghari US
Enweghị Atụmatụ Mberede: ATCEUC weputara Snapshot na Njikwa Ikuku Ikuku na Europe
Fraport iji buru ibu ọrụ maka njikwa na ịrụ ọrụ nke nyocha elele na ọdụ ụgbọ elu Frankfurt site na 2023
Ozi Njem Anguilla
Anguilla kwupụtara na imeghe ókèala May 25
Cracks na ụgbọ oloko dị elu na-akpata 'ọgba aghara dị ukwuu' nke ọrụ ụgbọ okporo ígwè UK
16 awa gara aga
Sweden njem ozi ọma
Dika ikpe kacha elu 1 nde, Sweden na-eche ihe kpatara nsogbu na 'atụmatụ COVID'
1 ụbọchị ago
Volaris: 107% nke ikike 2019 na 82% ibu ihe na Eprel 2021
Akụkọ banyere ọdụ ụgbọ elu
Ọdụ ụgbọ elu Sheremetyevo na-enye ndị lanarịrị WWII ọrụ pụrụ iche n'oge emume Day Victory
Akụkọ njem Egypt
Egypt mara ọkwa mgbochi ọhụrụ nke COVID-19